Fomba tsotra 6 hanatsarana ny fiantraikan'ny varotra atiny | Martech Zone
Talata, Martsa 31, 2015 Douglas Karr
Mbola misy orinasa any izay miady amin'ny paikady sy ny loharano ilaina hamokarana atiny mahomby. Ary maro amin'ireo orinasa ireo no tsy mahatsapa ny fiverenan'ny fampiasam-bola azon'ny tetikady marketing afa-po satria mety hiala haingana izy ireo na tsy azony tsara izay soratana, ahoana no hanoratany azy, ary aiza no hanoratany azy.
Ny statistika dia manaporofo fa ny varotra atiny dia namorona fahasamihafana lehibe eo amin'ny fandrosoana sy ny fampandrosoana ny orinasa eo amin'ny sehatry ny asa. Ny marketing amin'ny atiny dia afaka manova ny fomba fahitan'ny mpanjifa orinasa, ary hanome fanazavana momba an'io teknika noforoninay mitondra ny lohateny infographic io Ahoana ny fomba hahatongavana manam-pahaizana amin'ny marketing amin'ny atiny.
Ity infographic avy amin'ny Dot Com Infoway - masoivohon'ny varotra nomerika manonona ny tombony amin'ny programa marketing amin'ny atiny lehibe ary koa fomba tsotra hanatsarana ny paikadinao. Nahamarika toerana banga teo amin'ilay Misafidy lohahevitra lisitra fanamarinana - Tokony ho nataoko fikarohana fikarohana momba ny indostriao hamantarana lohahevitra, hijerena ireo lohahevitra malaza amin'ny tranokalan'ny mpifaninana, ankoatry ny fampahalalana vaovao momba ny indostria izay manome lanja ny mpihaino anao. Tahaka ny ataoko amin'ny fizarana an'ity sary ity - tsy mila miasa hatrany am-boalohany ianao - indraindray misy olona namoaka atiny misy lanjany ho an'ny mpihaino azonao zaraina.
Fizarana lehibe iray dia Zavatra 6 tokony hotadidina ao an-tsaina rehefa mamorona atiny marketing. Tiako ny filazan'izy ireo ny varotra satria orinasa be loatra no manoratra atiny miaraka amin'ny fanantenana fa hitanjozotra hankany ny olona… saingy mila ezaka bebe kokoa noho izany! Ireto misy fomba tsotra 6:
Mampiasà lohateny mahasarika maso hisarika ny saina.
Mijanona ho original.
Biby hita maso ny olona.
Mamorona atiny lehibe.
Mitadiava & kendreo ny mpihaino mety.
Tags: Content Marketingfiantraikany amin'ny marketing amin'ny atinydingana marketing amin'ny atinymanam-pahaizana